Myanmar Trade Center - MyanTrade
Myanmar Trade Center
မြန်မာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန(Myanmar Trade Center)
မြန်မာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာနကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး နှင့် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်(၂၁)ရက်၌ စတင်ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းဦးစီးဌာနကို နောင်အခါတွင် မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ အစည်း(Myantrade)အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
MTC သည် (Myantrade) လက်အောက် တွင် လူထုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ (MTC)၏ အဓိကရည်မှန်းချက်များမှာ ကုန်သွယ်မှု သတင်းအချက် အလက်များကို မေးရန်နှင့် ကုန်သွယ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် တုုိ့ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်မှုသတင်းအချက် အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြန့်ဖြူးရန်နှင့် ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးတွင် ဒေသဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန (၁၅)ခုကို ဖွင့်လှစ်ရန် (Myantrade)မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်၊ ဘားအံ၊ တောင်ကြီး၊ ပုသိမ်စသော မြို့ကြီးများတွင် ကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာနပေါင်း (၁၁)ခုကို ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
Ms. Mya Mya Sein, Duputy Director
No. 228/240, 2nd Floor , Corner of Strand Road and Shwe Bon Thar Street, Yangon, Myanmar.
Telephone: +951 254024, Fax: +951 254023, Email: [email protected]
Trade and Economic Information Service
Made in Myanmar Export Show Room
Export Product Advertising
Consultation on Trade and Economic
Seminars and Workshop on Business
(New) Myanmar International Trade Center
Address - No. 622/626, Merchant Road, Pabedan Township, Yangon, Myanmar
Inquiry Tel - 95-1-385323
click here for more info and service inquiry!